‘२ रुपैयाँ’ लाई शो नै शो : तयार हुनुहुन्छ, बुकिङ्ग खुल्यो ! « Ramailo छ
‘२ रुपैयाँ’ लाई शो नै शो : तयार हुनुहुन्छ, बुकिङ्ग खुल्यो !
भदौ २३, शुक्रबारदेखि प्रदर्शनमा आउने फिल्म ‘२ रुपैयाँ’ ले मल्टिप्लेक्स पर्दामा सर्वाधिक शो पाएको छ । निश्चल बस्नेत र आशिफ शाह स्टारर यो फिल्मले राजधानीका क्युएफएक्स अन्र्तगतका हलहरुमा मात्रै २४ शो पाएको छ । बुकिगं पनि बुधबार बाटै खुला गरिएको छ । शुक्रबार नयाँ फिल्म अन्र्तगत ‘२ रुपैयाँ’ को सोलो रुपमा रिलिज हुँदैछ ।
‘२ रुपैयाँ’ को ‘कुटुमा कुटु’ बोलको गीत सर्वाधिक हिट भैरहेको छ । फिल्म रिलिज पुर्व नै यो गीतको भिडियोले दुई करोड भ्युज पाइसकेको छ । राजनराज सिवाकोटीको संगीत, स्वर तथा शब्द रहेको गीतमा मेलिना मानन्धर र राजन इशानले स्वरमा साथ दिएका छन् । अशिम शाहको निर्देशन रहेको फिल्ममा निश्चल र अशिमसँगै बुद्धि तामागं, मेनुका प्रधान, टिका पहारी, राजन इशान लगायत कलाकारहरुको अभिनय छ । निश्चल र आशिफसँग गरिएको रमाइलो कुराकानी हेर्नुस् :